I-India inyusa amandla endiza yayo iye kuma-85% wamazinga wangaphambi kwe-COVID
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-India inyusa umthamo wayo wezindiza ube ngu-85% wamazinga wangaphambi kwe-COVID
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-India inyusa umthamo wayo wezindiza ube ngu-85% wamazinga wangaphambi kwe-COVID
I-India inyusa umthamo wayo wendiza iye kuma-85% wamazinga wangaphambi kwe-COVID
Izinguquko ezimenyezelwe nguMnyango Wezokundiza Komphakathi zizovumela abathwali bezindiza baseNdiya ukuthi basebenze izindiza eziningi futhi zizokhuphula imithwalo yabagibeli ngokuqala kwesizini yamaholide kazwelonke ngenyanga ezayo.
Uhulumeni waseNdiya uyayekisa imikhawulo yesikhathi se-COVID kubathwali bomoya basekhaya bezwe.
Izindiza zaseNdiya manje sezizovunyelwa ukusebenza kumaphesenti angama-85 omthamo wazo wangaphambi kobhadane.
Izindiza ezindiza ekhaya zaseNdiya zizovunyelwa futhi ukuthi zibeke imali yazo yamathikithi ngaphezu kwezinsuku eziyi-15 kusukela ngosuku lokubhuka.
UMnyango Wezokundiza Komphakathi e-India uphakamise inani labaphethe umoya wasekhaya namuhla, okwenza izindiza zaseNdiya zisebenze kuma-85% wamandla azo wangaphambi kwe-COVID-19 esikhundleni samanje esingu-72.5%.
Isiphathimandla sezindiza saseNdiya naso siguqule ifomula yenani lentengo, okuvumela izinkampani zezindiza zasekhaya ukuthi zibeke imali yazo yamathikithi ngaphezu kwezinsuku eziyishumi nanhlanu zosuku lokubhuka.
Kuze kube kulungiswa namuhla, amakhophi entengo abesebenza kumathikithi kuze kube yizinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku lokubhuka.
Izinguquko ezimenyezelwe yi- UMnyango Wezokundiza Komphakathi kuzovumela abathwali bomoya baseNdiya ukuthi basebenze izindiza eziningi futhi kuzokhuphula imithwalo yabagibeli ngokuqala kwesizini yamaholide kazwelonke ngenyanga ezayo.
Ithrafikhi yomoya yasekhaya yaseNdiya inyuke ngama-34% yaya ezigidini ezingama-6.7 ngo-Agasti ngokulandelana ngokulandelana ngemuva kokwenyuka komthamo kuya kuma-72.5%.
Ukwanda kokugoma kanye nezidingo zokuhlolwa ezikhululekile ze-COVID-19 nakho kusizile. Ukuhlala kwezihlalo ezimbonini nakho kukhuphuke kwaya ngaphezu kwama-70% ngenyanga edlule.
Ukuyekethiswa kwamandla endiza nokuncishiswa kwemikhawulo yamanani kuza ngemuva kwezingxoxo eziningi phakathi kwe-Civil Aviation Ministry yaseNdiya kanye nabaphathi bezindiza baseNdiya.
Ukunyuselwa kwenani lentengo kanye nemali yokugibela kwehlukanise kakhulu imboni noRonojoy Dutta, oyi-CEO yenkampani enkulu yezindiza eNdiya Indigo, ebiza ukususa ukugxambukela kukahulumeni ngentengo namandla, ethi lokhu kuvimbela izinkampani zezindiza ekuthatheni izinqumo ezisuselwa kwezentengiselwano.
Abasebenza ezikhumulweni zezindiza ezinkulu kunazo zonke ezweni — iDelhi, eMumbai, eBangalore - banxuse uhulumeni ukuthi aqede izixazululo zamandla nezentengo ngoba lokhu kuphazamisa ukubuya kwabagibeli futhi kulimaza kabi imali engenayo yezikhumulo zezindiza ezinabantu abaningi eNdiya.